समय सन्दर्भ Archives - Janakhabar
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी न आफ्नो स्थापना कालको अवस्थामा छ, न त आजको जस्तो मात्र भएर भविष्यको भूमिका पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले होला महासचिवले बैठकमा भन्नुभएको थियो– “इतिहासको व्याख्या गर्न त सजिलै हुन्छ,सबैले गर्न सक्छन्, सजिलो पनि हुन्छ तर भविष्य देख्ने, बनाउने मान्छे कमै हुन्छन्, हामीले भविष्य देख्न र देखाउन सक्नु पर्दछ ।” यो धारणाको […]
२०७४ मा भएको तीनै तहका निर्वाचनहरुलाई हाम्रो पार्टी नेकपाको आठौं केन्द्रीय समितिको पहिलो वैठकले एक मतले खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । तीनै तहका चुनावहरुलाई पार्टीले सफलताकासाथ खारेज गरी बहिस्कारको कार्यनीति एकरुपतामा कार्यन्वयन गर्न सफल भएको थियो । त्यसैले हाम्रो पार्टी नेकपालाई जनप्रिय र एउटा बैकल्पिक क्रान्तिकारी पार्टीमा स्थापित ग¥यो । पार्टी, नेतृत्व, कार्यदिशा, विचारधारालाई एक […]
१. नेतृत्वको नियत र प्रवृत्ति प्रधान हुन्छ – क्रान्ति र पार्टीको चिन्ता छ भने त्यो नेतृत्वले थुप्रै व्यक्तिगत स्वार्थलाई बलिदान गरेको हुन्छ । नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा किरण र विप्लव त्यो उचाई प्राप्त गरेका नेताहरु हुन् । अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाविरुद्ध एउटा गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छन् । दुःखको कुरा के हो भने जुन सहकर्मी नेताहरु जेलबाट […]
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने विषयलाई लिएर अहिले व्यापक बहस छ । यस बारे पार्टी पंक्ति र बाहिर, आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । यसै विषयलाई लिएर कञ्चन र सुदर्शनलाई पदमुक्त गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । यही सेरोफेरोमा यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।चुनावी […]
यतिबेला हाम्रो पार्टीमा एक प्रकारको संकट आएको छ । यो संकटले हाम्रो पार्टीप्रति आकांक्षा राख्ने श्रमजीवि जनतालाई दुःखी तुल्याएको छ । बिरोधीहरुलाई सकुन मिलेको छ । बीचका खेलाडीहरुलाई रोमान्स अनुभूति भएको होला । सिद्धान्तका डिङ हाक्नेहरुलाई यो बेला आपूmलाई बिक्न निकै सहज बनेकै छ । आमजनता हामीलाई आशाको नजरले हेर्छन । हाम्रो नीति र हाम्रो […]
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १२ औँ पूर्ण बैठक असामान्य चर्चामा रहेको थियो । क्रान्तिकारी र देशभक्त धाराको नेतृत्वदायी शक्ति हुनु र यसका निर्णयहरुले देशको राजनीति प्रभावित हुने भएको कारण सञ्चार र बौद्धिक जगत्को ध्यानाकर्षण गरेको थियो । अर्कोतिर कार्यदिशा बुझ्न नसकेका र खराब नियत भएका कतिपय तत्वहरुले पार्टी एकता र पार्टी पद्धतिविरोधी खेलोमेलो गरिरहेका थिए । […]
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कुटनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप यो वा त्यो बाहनामा प्रकट भइरहन्छ । भारतीय शासक वर्ग नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका विरुद्धमा सधैं निमर्म ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरेको छ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण छ । नेपालको अर्थतन्त्र र शैक्षिक प्रणालीमा भारतीय प्रभाव छ । नेपालको भौगोलिक अर्थात् […]
देशभरका स्थानीय सरकार प्रमुखज्यू सबैमा अभिवादन, नमस्कार ! हुन त व्यक्तिगत रूपमा अहिलेका सबै सत्ता र निकायप्रति हाम्रो असहमति छ, फेरि पनि आमजनताको रूपमा यो पत्र लेख्दै छु । सदा जसो आराम रही आरामताको कामना गर्न सक्ने हालतमा छैन, भौतिक रूपमा त्यस्तो केही शारीरिक समस्याहरू नभए पनि पछिल्लो कोरोना महामारी र बाढी पहिरोले निम्त्याएको मानवीय […]
नेपालको राजनीति एक पटक फेरि संसदीय गोलचक्करमा भासिन पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । संसद् विघटनसँगै नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ । संसद्वादी राजनीतिक दलमध्ये केपी नेतृत्वको एमाले, जसपाअन्तर्गत महन्थ ठाकुर र राप्रपाइतर पक्ष काँग्रेसको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी गरी केपीको कदमलाई असंवैधानिक, प्रतिगमनकारी […]
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल सरकार बिच गत फगुन २१ गते तीन बुँदे सहमति भयो जसको पहिलो बुँदामा “दुबै पक्ष (नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता तथा सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौ”, दोश्रो, “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफना सबै राजनीतिक कार्यक्रमहरु शान्तिपूर्ण रुपमा संचालन गर्न सहमत भएको छ”, तेश्रो, “नेपाल सरकार नेपाल […]